ပုံရိပ်ယောင် ရည်းစားကိုသာ ရွေးချယ်မှု ပိုမိုပြုလုပ်လာတဲ့ ဂျပန်က အမျိုးသမီးတွေ | Buzzy
ပုံရိပ်ယောင် ရည်းစားကိုသာ ရွေးချယ်မှု ပိုမိုပြုလုပ်လာတဲ့ ဂျပန်က အမျိုးသမီးတွေ
ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေဟာ သူမတို့ရဲ. မအောင်မြင်တဲ့ အချစ်ရေး ၊ အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် ဂိမ်းတွေထဲက ပုံရိပ်ယောင် ရည်းစားကို အစားထိုး အသုံးပြုလာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂပြနျနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှဟော သူမတို့ရဲ. မအောငျမွငျတဲ့ အခဈြရေး ၊ အဆငျမပွမှေုတှအေတှကျ ဂိမျးတှထေဲက ပုံရိပျယောငျ ရညျးစားကို အစားထိုး အသုံးပွုလာကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သန်းနဲ့ချီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေထဲက ဇာတ်ကောင်အမျိုးသားတွေနဲ့ ပုံရိပ်ယောင် သမီးရည်းစားအဖြစ် နေထိုင်ပြီး သူတို့ရဲ. လစ်ဟာနေမှုကို အစားထိုး အသုံးပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် ပုံမှန် ချစ်သူရည်းစား ဂိမ်းတွေသာမက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ ပါဝင်တဲ့ ဂိမ်းတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကြား ရေပန်းစားနေတာပါ။
သနျးနဲ့ခြီတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော မိုဘိုငျးဂိမျးတှထေဲက ဇာတျကောငျအမြိုးသားတှနေဲ့ ပုံရိပျယောငျ သမီးရညျးစားအဖွဈ နထေိုငျပွီး သူတို့ရဲ. လဈဟာနမှေုကို အစားထိုး အသုံးပွုတယျလို့ သိရပါတယျ။ ယနခေ့တျေမှာဆိုရငျ ပုံမှနျ ခဈြသူရညျးစား ဂိမျးတှသောမက လိငျပိုငျးဆိုငျရာ လုပျဆောငျခကျြတှပေါ ပါဝငျတဲ့ ဂိမျးတှဟော အမြိုးသမီးတှကွေား ရပေနျးစားနတောပါ။
ဂိမ်းထဲမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ စိတ်ကြိုက် အမျိုးသားပုံပန်းကို ရွေးချယ်ခွင့် ရှိနေတာပါ။ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားပြီးကတည်းက ဂိမ်းထဲမှာပဲ ရည်းစားထားကြောင်း ၊ ဒီဇာတ်ကောင်တွေဟာ ကိုယ်လိုချင်တာကို လုပ်ပေးကြောင်း ၊ တကယ့်အမျိုးသားတွေ မလုပ်ဆောင်နိုင်တာကို လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဂိမျးထဲမှာဆိုရငျ အမြိုးသမီးတှဟော သူတို့ စိတျကွိုကျ အမြိုးသားပုံပနျးကို ရှေးခယျြခှငျ့ ရှိနတောပါ။ အသကျ ၃၁ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတဈဦးက သူမဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ရှဈနှဈ ရညျးစားနဲ့ ပွတျသှားပွီးကတညျးက ဂိမျးထဲမှာပဲ ရညျးစားထားကွောငျး ၊ ဒီဇာတျကောငျတှဟော ကိုယျလိုခငျြတာကို လုပျပေးကွောငျး ၊ တကယျ့အမြိုးသားတှေ မလုပျဆောငျနိုငျတာကို လုပျပေးနိုငျကွောငျး ဆိုပါတယျ။
သူမက ကျွန်မအနေနဲ့ အထီးကျန်ရပါတယ် ၊ ဒါ့အပြင် ဂျပန်အမျိုးသားတွေဟာ အရှက်ကြီးပြီး ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ပြောဖို့ ဝန်လေးလွန်းတာမို့ စိတ်ပျက်မိပါတယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။ သမီးရည်းစားဂိမ်းထဲမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေလိုချင်တဲ့ Romatic ခံစားချက်မျိုးကို ရရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမက ကြှနျမအနနေဲ့ အထီးကနျြရပါတယျ ၊ ဒါ့အပွငျ ဂပြနျအမြိုးသားတှဟော အရှကျကွီးပွီး ၊ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ခဈြတယျပွောဖို့ ဝနျလေးလှနျးတာမို့ စိတျပကျြမိပါတယျလို့ သူမက ဆိုပါတယျ။ သမီးရညျးစားဂိမျးထဲမှာတော့ အမြိုးသမီးတှလေိုခငျြတဲ့ Romatic ခံစားခကျြမြိုးကို ရရှိစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဂိမ်းကနေ ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၆.၅ ဘီလီယံလောက် ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းမှာ အသက် ၁၈ ကနေ ၃၄ နှစ်ကြားထိ တစ်ကိုယ်တည်း နေထိုင်နေသူတွေ များစွာ ရှိနေပြီး ဂိမ်းကုမဏီတွေအတွက် တကယ့်ဈေးကွက်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂပြနျနိုငျငံဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈအတှငျးမှာ ဂိမျးကနေ ဝငျငှဒေျေါလာ ၆.၅ ဘီလီယံလောကျ ရရှိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ နိုငျငံအတှငျးမှာ အသကျ ၁၈ ကနေ ၃၄ နှဈကွားထိ တဈကိုယျတညျး နထေိုငျနသေူတှေ မြားစှာ ရှိနပွေီး ဂိမျးကုမဏီတှအေတှကျ တကယျ့စြေးကှကျကွီး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။